SPS-FGB Fibre Glass IBhodi Squeegee - China Changzhou Plet Ukuphrinta
SPS-FGB Fibre Glass IBhodi Squeegee
Nakuba komnotho jikelele ngo-2015, kodwa esibukweni ukuphrinta umkhakha namanje uzuze imiphumela emihle kakhulu, futhi kulo nyaka, izinkampani eziningi wokunyathelisa kwesikrini futhi ngokusebenzisa umkhiqizo nokwenza, umthombo ukuhlanganiswa nezinye ukuguqulwa, benethemba lokuthola ngokushesha uthatha umkhakha sika uyayala eziphakeme, nakho ukukhuthaza I ukuthuthukiswa imboni wokunyathelisa kwesikrini. Njengamanje, wokunyathelisa kwesikrini bekulokhu okwengeziwe okuthuthukisiwe ngcono kokubili ezishintshayo technology, ikhwalithi ubuchwepheshe, ezingeni ngamathuluzi nangezinto zokwakha yokukhiqiza.
Ngo ukuthuthukiswa kwesikrini ukuphrinta umkhakha, uyinki, screen izikrini ukunyathelisa imishini ukuphrinta zivame ukukhathazeka. Kodwa, bambalwa abantu banesithakazelo wokunyathelisa kwesikrini futhi squeegee. Nokho, squeegee kunendima eyinhloko kule fineness nokuzinza kokunyathelisa. Iqhaza. Changzhou Preet Ukuphrinta Technology Co., Ltd. (esifushanisiwe ngokuthi "Platt") iyinhlangano umphakeli professional of okudlekayo wokunyathelisa kwesikrini. Ngaphansi umsebenzi walo ngokungakhathali ucwaningo futhi kanzima, SPS Precision Screen Ukuphrinta futhi Squeegee uye kancane kancane iwine ukuqashelwa emakethe futhi umkhakha. Izimo zethu zihluke kakhulu ezidumile. Ngo-2016, imikhiqizo main Pratt sika kukhona SPS-FGB fiberglass nokususa kanye SPS-FGB-NJENGOBA carbon fibre nokususa antistatic.
Buhle SPS-FGB fiberglass nokususa wukuthi ibhodi ingilazi fibre isekela inhlaka nokususa. Ngisho noma inhlaka nokususa ugcwala ku inki isikhathi eside, ukunyatheliswa akuyona zikhubazekile kalula. Ngakho-ke, i-SPS-FGB ingilazi fibre ibhodi nokususa glue anganikeza Kwanyatheliswa ingcindezi esitebeleni. , Ngokuvumelana ukuphrinta engela, okusezingeni eliphezulu nemihuzuko ukumelana naso futhi kwenze ukumelana kuphela, efanelekayo ukucacisa screen ukuphrinta umkhakha ezifana imigqa emihle, ukuphrinta dot, futhi film ukushuba control, njenge: Isikrini ukuphrinta omnyama nomhlophe ikhava kwesikrini, uthinta isikrini TP esiliva ukulawula film ukushuba (ekulondolozeni 8% Namathisela Isiliva), Ikhaya zikagesi Ukuhlobisa Imboni okungabonakali Umbala & Dot Ukuphrinta, Ikhaya zikagesi Ukuhlobisa Imboni Pearl Powder Ukuphrinta (Screen Ukuphrinta Easy Ukuze Ink), Imoto Dashboard Imboni Khuhla Inks Futhi okungabonakali Color Ukuphrinta, Khanyisa Guide ipuleti Imboni Dot Ukuphrinta, RF Ilebula abahle Isiliva line ukuphrinta, photovoltaic igridi umugqa ukuphrinta nokunye.
SPS-FGB-NJENGOBA carbon fibre squeegee anti-static akanalo nje ukusebenza ngokugcwele FGB fiberglass squeegee, kungase futhi ukudedela zikagesi elakhiwe phakathi kwenqubo zokunyathelisa. Ngoba SPS-FGB-NJENGOBA anti-static carbon fibre nokususa glue wenziwe conductive carbon fibre ebhodi kanye anti-static NJENGOBA nokususa glue, NJENGOBA nokususa iraba ongaphumelela ukunciphisa nokususa ukumelana Inani 10 MΩ, okungase ezikhishwe phakathi ukuphrinta inqubo. I zikagesi ukugwema ekuqongeleleni electrostatic esikrinini inqubo ukunyathelisa futhi lo mkhuba ukudweba kanye flying inki, okuyinto sizazise kakhulu izinga umkhiqizo.
Quality unika imfudumalo umkhiqizo, ibonisa uhlamvu yenkampani, futhi kubuye inzuzo sokuthuthukiswa inkampani. Ukuze izinga lomkhiqizo, Prete ngokuqinile elawula izinto zokusetshenziswa, antjintje izinqubo zesayensi zokukhiqiza, kanye engikhiphela izinqubo azinabo sokuhlola. Ngokombono share emakethe, isu umbala sika uzuze imiphumela emihle kakhulu. Kodwa izikhali umbala osindayo akugcini lokhu. Enkathini yangaphambi kwezincwadi nakho isevisi ngamakhasimende, Pretto ubeka inkonzo lokuqala ekuthuthukiseni ebhizinisini, futhi ephelele ukumaketha inethiwekhi futhi pre-yokuthengisa uhlelo emva-sales service. Online pre-yokuthengisa kokubonisana lobuchwepheshe ungentiwa esusela iziteshi inthanethi kanye okungaxhunyiwe, futhi ukuhleleka izinhlelo kanye nezinsiza-TV Standardization ingatholakala ngesikhathi ukudayiswa, ukuze sanelise izidingo ikhasimende ngokwezinga esiphezulu kungenzeka. Umsebenzi Pratt sika: ukwethulwa kasilika screen ukuyiprinta imikhiqizo emisha, izinqubo ezintsha, futhi kwenyuswe ukuthuthukiswa umkhakha kasilika screen.